ABB motors dziri kutengeswa, abb motors mutengo runyorwa, abb motors vanogovera, mota abb
ABB motors vaparidzi
Imwe yeakanakisisa ABB motors vanogovera uye vatengesi kubva kuChina
Tora abb motors katalog kubva, isu tinotengesa abb low voltage motors, abb yakakwira voltage mota, abb servomotors uye abb synchronous motors. Kana taura nesu kuti uwane iyo abb motors rondedzero yemutengo, seyakagamuchirwa abb motors vatengesi uye abb motors vagoveri, tinogona kuita abb mota kusarudzira iwe neabb mota data sheet. abb anotyaira ari kutengesa, kana iwe uchida kutsvaga abb mutengesi, mota abb, ingo taura nesu.
ABB mota M2BAX
ABB mota M2BAX akateedzana matatu-chikamu asynchronous mota, yakatwasuka uye yakatwasuka mhando 2 4 6 8 pole mota, Yakadzika voltage General mashandiro emota, akakodzera zvakanyanya kune akajairwa akajairika dhizaini ekushandisa. Iine mhando yeABB yekutanga-kirasi uye rutsigiro rwakasimba, mashandiro emota idzi anozivikanwa nenhamba huru yevatengi nemaOEMs. Iyo mota inobudirira kuita IE2. Saizi saizi kubva 71-355, 0.18-355KW. M2BAX akateedzana mota anounzwa kunze mabheyaringi NSK, SKF brand mabheyaringi, mota dzese dzakashongedzerwa ne axial yekuvhara mabheyari kumagumo eD. Iyo chigadzirwa dhizaini yekuchengetedza kirasi IP55, ichiri kupa IP56, IP65 kugadzirisa. Inopa akawanda emota kusiyanisa kodhi sarudzo yekumisikidza kusangana nezvinodiwa zvemamiriro akasiyana siyana.
ABB motors M3BP
abb mota m3bp dzakateedzana, yakanyanya kushanda mota, simba-yekuchengetedza mota mota, inharaunda ine hushamwari mota. Kubudirira: European Kirasi I kunyatsoita zviyero, · Simba: 0.25-710KW (inopfuura 710KW inogona kupinzwa kunze neM3BP mota), · Voltage: 220-690V, · Inogona kuve nemhando dzakasiyana siyana dzakadai se encoder, · Independent kutonhora system inowanikwa, · Inesarudzo yakajairwa kana inowirirana frequency frequency drive, · Inverter drive simba> 100KW, inoda kuve yakagadzirirwa kutapira mabheyaringi, M3BP71, M3BP80, M3BP90, M3BP100, M3BP112, M3BP132, M3BP160, M3BP180 ； M3B200 M3B225 M3B250 M3B M280BP3, M315BP3
MQAEJ, QAEJ akateedzana matatu-chikamu asynchronous mota electromagnetic brake chinhu chinotsiva chigadzirwa chekare rudzi MYUEJ uye YUEJ akateedzana. Chimiro chayo chakasanganiswa cheQA akateedzana motors uye electromagnetic mabhureki. Iyo yakakodzera dhiraivha yekushandisa kwemaindasitiri kwazvino. Iyo ine zvakanakira zvesimba rakakura remagetsi, chimiro chakareruka, ruzha ruzha, pfupi pfupi braking nguva, yakavimbika braking performance, uye yakaenzana zvimiro zvekuisa (kunze kwehurefu hwakazara). Yakashandiswa yakawanda mumashini ekugadzira matanda, simba tranmission drive uye dzakasiyana-siyana simbi yekucheka michina maturusi, akapenya maindasitiri ekugadzira mitsara, machira emuchina, machina michina, kuvaka indasitiri, nezvimwewo.
Iyo M2JA yakateedzana ABB mota kuputika-chiratidzo cheMarine chakagadzirwa nehupamhi hwemagetsi, uye kugona, simba chinhu uye kumhanya kwemota zvinosiyana zvishoma pasi pemamiriro akasiyana emagetsi mamiriro.BT4 yakatwasuka yakatwasuka CT4, 50Hz: 220-240V / 380-420V; 380-420V / 660-690V, △ / 丫. Zvekubatana. · B3 furemu saizi ine tsoka, kapu yekupedzisira isina flange, B5 furemu saizi isina tsoka, chifukidzo chekupedzisira ne flange, B35 furemu saizi chigadziko netsoka uye magumo ekuvhara ne flange. Usd yeIyo mune petroleum, gasi rechisikirwo nemakemikari maindasitiri, akasiyana magasi anopisa kana mhute anogona kugadzirwa mukugadzirwa. Semuenzaniso, zvigadziriso zvinosanganisira propane, butane, peturu, ethylene uye acetylene; uye zvirimwa zvemanyowa zvine ammonia, methanol, carbon monoxide uye gasi remvura.
- Iko kugona, simba chinhu, uye kumhanya shanduko zvishoma pasi pemamiriro aya.
Iyo QABP inoshanduka frequency frequency drivecontroled matatu-chikamu asynchronous mota mota inoita frequency shanduko uye nekumhanyisa mutemo kuburikidza neiyo frequency converter. Iyo mota inotora squirrel-keji chimiro uye yakagadzirirwa yakasarudzika axial kuyerera fan kuti ive nechokwadi chekuti mota ine yakanaka kutonhora mhedzisiro pakasiyana kumhanya. Iyo mota yakave yakagadzirirwa zvakagadzirwa uye kugadzirwa kwakasiyana-siyana kweasina danho kumhanyisa mirau, uye inogona kushandiswa zvakanyanya mumaindasitiri senge akareruka maindasitiri, machira, kemikari, simbi, maturusi emuchina uye zvimwe zvekumhanyisa masimba masimba emagetsi. Iyo mota tsoka inokwira kukura uye nzvimbo yekukwirira magadzirirwo anoenderana neM2QA akateedzana mota. Simba reiyi nhevedzano yemamota rinobva pa0.25KW-315KW, uye kureba kwepakati kwechigadziko kuri kubva pa71mm-355mm.
QAMT inoteedzera matatu-chikamu induction motors yemagirazi mashini. QAMT serials mota yakanyatsogadzirirwa girazi yakadzika ekugadzirisa michina. Iyo ine yakanaka airproof, uye iyo furemu zvinhu zvinoshandiswa nesimbi yakakura simbi yakakoswa, SKF inobereka. Izvi zvinova nechokwadi kuti mota inogona kumhanya nenzira yakatendeka pasi peyakaoma mamiriro. QAMT serials mota yakakodzera kune akasiyana girazi yakadzika mashandiro mashini.
Mutengo: ABB Model: M3AA akateedzana Aluminium dzimba, 0.55KW-30KW; Kwayakavamba: China yekumisikidza chimiro mhando: Mamwe magetsi emagetsi modhi: AC magetsi magetsi mhando: AC mota inoshanda musimboti: Asynchronous mota mamiriro uye inoshanda musimboti: Induction mota inomhanya mhanyisa: Inogara ichimhanya mota simba chikamu: Matatu-chikamu mota oparesheni Mode: Zvimwe zvinoshandiswa: General basa mhando: Dhiraivhu mota yekudzivirira mhando: Vhura inoisa kirasi: Kirasi F. Iyo yakajairika dhizaini yekuchengetedza mota ndeye IP55, iyo inopa yakakwira dhigirii rekudzivirira zvinoenderana nevatengi zvinodiwa.Iyi standard mota inoshandisa Kirasi F kuputira kuwedzera mota mota uye wedzera mota kuvimbika. kushanda zvakanaka, M3AA mota yakagadziridzwa kuti inyatsoshanda uye inoburitsa yakawanda simba rekuchengetedza.
M2JAX kuputika-kuputika-chiratidzo chetatu-chikamu asynchronous ABB motors inogadzirwa neABB Motors Corporation vachishandisa nyowani yekuputika-proof mota yekugadzira tekinoroji uye kusanganisa maitiro eChina's GB 3836-2000 standard. Izvozvi zvinoshandiswa mumafekitori emukati eClass 4 kuputika-chiratidzo motors (Ex d C) zvigadzirwa (Tembiricha boka T1-T4). Yakazara yakazara yakakomberedza wega inotonhorera
About ABB Motors uye mechaniki inc
ABB motors uye mechanic inc inopa akasiyana emagetsi mota zvinoenderana neECC mienzaniso yekusangana nezvinodiwa zveindasitiri dzakasiyana, zvinosanganisira standard motors, musiyano frequency mota, marine motors, kuputika-proof motors, isiri kupenengura motors, flue motors, maviri- kumhanyisa mota, brake motors, uye okunze rotors. Mota, kugaya musoro mota. Special motors inogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, zvese izvi zvinosangana nezvinorema zvinodiwa nevatengi vedu. Panguva imwecheteyo, kambani inopa mota dzakasiyana siyana dzakasiyana dzekupfekedza uye dzakasiyana dzemagetsi uye frequency zvinodikanwa. Vatengi vekambani iyi OEM vatyairi vanodziya vemhepo, machina emuchina uye cranes, mapombi, zvidzoreso, michina michina, machira emuchina, magirazi michina, ngarava, magetsi ekudyara michina yekubatsira, wedhodhi bhodhi machina uye vamwe vatungamiriri veindasitiri. Kuvhara kweProjekiti: magetsi ekudyara, dhirowa uye pepa, petrochemical, simbi, ngarava, chiteshi, kuvaka, simende, airport, etc. Parizvino, 45% yeemotor inogadzirwa nekambani inotumirwa kunze kwenyika kuburikidza neABB yekutengesa kune dzimwe nyika network, kunyanya Musika weEurope.
Nezve abb motors catalog uye abb motor data pepa
Tine ese abb motors katarogu muruoko rwedu uye taura nesu kune iyo abb mota data sheet kana abb mota dhizaini iwe yaunoda uye isu tinokutumira iwe kana tangoiwana.
About abb motors vanoparadzira uye abb motors vatengesi
Isu tiri mumwe weVatengesi vatengesi kubva kuABB uye isu tinogona kukupai rese chitupa kuti mutitsigire seabb distributor. uye zvechokwadi, ese maABB motors kubva kwatiri ndeechokwadi uye mhando inovimbiswa.
NezveABB mota kusarudzwa uye nameplate zvinhu
Pane zvakawanda zvinhu zvekuona chaiyo iyo ABB motors iyo ichave iri yepamusoro yeyo yur application. Tichaita iyi sarudzo. Iyo inonyanya kuunzwa kunze ndeyekuti iwe unofanirwa kutipa isu zvakanyanya sezvinobvira kune izvo ruzivo, semuenzaniso, iko iko kushandisa iyo dhizaina inogara torque kunyorera? Iko kuita kwekuita kuri kumhanya zvakaderera sei? nezvimwewo Pane angangoita ese ruzivo ruzivo mune iyo abb mota nameplate.
No.5 Wanshoushan Road Yantai, Shandong, China
Isu tinogadzira Creative posibbibes
kune vatengi vedu
ABB motors inopa vatengi vane inoshanda uye yakavimbika ABB zvigadzirwa uye masevhisi neayo akanaka manejimendi uye epamberi tekinoroji. Simba reABB simba riri padyo ne100%, ichichengetedza inosvika kumadhora mazana mashanu ezviuru. ABB motors inogadzira edu akagadzirirwa motors ikozvino akakwirira kumhanya ratios akatsigirwa, uyezve epasirose yakakwira voltage mota inosangana neakakwira mhando uye mutengo mashandiro
ABB Motors nejenareta inoshandiswa kweKuvaka kweMarine indasitiri
Zvigadzirwa zveABB, mhinduro uye masevhisi ekuvaka Ship yekuvaka indasitiri yeMarine iyo inogona kuona kuita kwakanaka uye kuvimbika kunyangwe mukuda kwekushandisa. Yedu Kuvaka kwekuvaka kweMarine indasitiri zvigadzirwa zvinogona kusangana nekuchengetedzeka kwepamusoro uye zvakatarisirwa zvinodiwa, uye yedu yepasi rese network inoona kuti iwe unogona kupindura nekukurumidza uye pese paunenge uchizvida.
ABB inopa yakazara yakazara mota, jenareta uye kuendesa kune marine application, inosanganisira induction uye synchronous motors uye jenareta, pamwe neakaderera uye epakati magetsi anotyaira. Yedu yakakura indasitiri chiitiko inotibvumira kunzwisisa izvo zvinodikanwa zvevatengi vedu uye kutiita isu rudzi runovimbika.
ABB Motors nejenareta inoshandiswa kumigodhi indasitiri
Iyo indasitiri yemigodhi nemaminerari inosanganisira magetsi nemishini yekugadzira mumigodhi uye ore michina yekudyara yekutsvagisa uye kugadzirisa ore.
Iyi indasitiri yemigodhi yepasi rose iri kuita mubatanidzwa iyo yaunza mashoma uye madiki asi makambani makuru emigodhi kutonga mumusika. Aya makambani makuru evatengi ane bhizinesi neABB motors nekuti rubatsiro rweABB kune zvigadzirwa nemasevhisi harungogumwi mumigodhi. ABB inopawo OEM uye EPC vanobatana nezvigadzirwa uye masevhisi.
Kudiwa kwezvigadzirwa zvemukati kucharamba kuchikura, asi mhando yemasaridhi asara asara ave akadzika uye akaderera, izvo zvichitendera makambani emigodhi kukwirisa uye kuwedzera chigadzirwa kuti chirambe chakakwikwidza mumusika. Aya makambani emigodhi anotsvaga kutungamira tekinoroji kubva kuABB kuvabatsira kuti vazadzise zvinangwa zvavo zvekuvandudza kuvimbika, kuderedza mashandisiro esimba, uye kuwedzera automation nemuchina. ABB motors zvigadzirwa uye masevhisi anowanzo pfuura zvinotarisirwa nevatengi uye ishamwari yakanakira yemakambani epamigodhi yepasi.
ABB Motors nemagetsi ekugadzira petroleum, gasi rezvisikwa uye maindasitiri emakemikari
Kuburikidza nehunyanzvi hwekushandura makabhohaidhiremu, maoiri, gasi uye maindasitiri emakemikari anosangana nezvinodiwa zvepasi rese zvemafuta, chikafu, pekugara uye hutano. ABB inoenderera mberi nekuwedzera kudyara kwayo muhunyanzvi hwekubatsira iyo maoiri, gasi uye maindasitiri emakemikari kuchengetedza simba, kushanda zvakachengeteka uye kuderedza kukanganisa kwezvakatipoteredza.
ABB motors inopa yakazara yakazara yakavimbika, inoshanda mota uye mafirifetita inoshandura yeiri rose mafuta, gasi uye emakemikari maindasitiri. Zvigadzirwa zveABB zvakagadzirirwa iyo indasitiri maindasitiri, uye tekinoroji yavo yekuchengetedza inovimbisa yakakwira yepamusoro uye isingakwanisi kuchengetedzwa. Yedu yakakura indasitiri chiitiko inotibvumira kunzwisisa zvaunoda uye ndiye waunovimba naye waunovimba naye.
ABB Motors uye jenareta zvekudya uye chinwiwa indasitiri
ABB Motors dzakashandiswa mukudya uye chinwiwa indasitiri inosakura inofanirwa kuzadzisa zvinodiwa, senge grinders, musanganiswa uye maereketa anoshandiswa mukugadziriswa kwenyama, huku, hove, mukaka uye zvigadzirwa zvekubheka. Panguva imwecheteyo, zvishandiso zvinoshandiswa mukudya uye kunwa zvinwiwa zvinoda-isina-kupora, kumhanya-mhanyisa, uye yakanyanya simba simba mukati mehupenyu hwayo hwese.
Abb motors inopa huwandu hwakafambiswa, hunoshanda uye hwakavimbika mota dhiraivha yezvokudya uye chinwiwa indasitiri, kubva kubikwa kwezvinhu zvinogadziriswa, kugadzirisa matanho uye kuendesa kune zvekutakura chikafu uye kuchengetedza munzvimbo dzakadai sekugadzirwa kwenyama uye zvigadzirwa zvemukaka. Sangana nezvinorema zveindasitiri zvinodiwa.
Kunyangwe mukushandiswa kunonyanya kudiwa, zvigadzirwa zveABB uye masevhisi anobatsira kuwana yakakwirira yekubudirira kwesimba uye kubereka muchiitiko chose. Nemidziyo yakasarudzika uye tekinoroji yepamberi, ma motors eiyo yekudya uye chinwiwa indasitiri inogona kusangana nematambudziko ehurongwa hwekushandisa uye inoshanda nekuvimbika uye zvichiramba.